Kutangazve kushanya kweguta reEurope iko zvino kwakaoma kuita kuenzanisa nezvido zvevagari venzvimbo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Kutangazve kushanya kweguta reEurope iko zvino kwakaoma kuita kuenzanisa nezvido zvevagari venzvimbo
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Czechia Breaking News • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • Spain Kuputsa Nhau • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kutangazve kushanya kweguta reEurope iko zvino kwakaoma kuita kuenzanisa nezvido zvevagari venzvimbo.
Sezvo maguta eEurope ane mukurumbira anovhurwa zvizere kune vashanyi vekunze, vakuru vezvekushanya vanofanirwa kushandisa nguva ino yekukura patsva kuti vawane kuenzanisa pakati pekuita pundutso yehupfumi uye kuve nehupenyu hwakanaka hwevagari.
Denda repasi rose reCCIDID-19 rakakanganisa zvakanyanya kushanya kwemaguta eEurope.
VekuEurope vari kutanga kudzoka kumaguta makuru muEurope yese vaine chivimbo chekuti varohwa kaviri.
Denda reCCIDID-19 risati rasvika, kuwedzera nguva dzose mukushanya kwenyika kumaguta akadai seBarcelona, ​​​​Amsterdam nePrague kwakakonzera kutsamwa pakati penharaunda.
Kubva pakabuda vatakuri vemitengo yakaderera uye mafomu ebhajeti epekugara, mukurumbira wekushanya kwemaguta kwakawedzera zvakanyanya mukati mekufamba kwemukati meEurope. Sekureva kwevanoongorora maindasitiri, 38% yevakapindura vakati vanowanzoita rwendo urwu, zvichiita kuti ive yechitatu inonyanya kufarirwa pasi rose, kuseri kwezuva nekushanya kwemahombekombe uye kushanyira shamwari nehama (VFR).
Pamberi peCOVID-19 denda, nguva dzose gore-pa-gore (YoY) inowedzera mukushanya kwenyika kumaguta akadai Barcelona, Amsterdam uye Prague zvakakonzera hasha pakati penharaunda dzenzvimbo, zvichiita kuti hurumende dzomunharaunda dzimanikidzirwe.
Kunyangwe denda iri rakakanganisa zvakanyanya kushanya kwemaguta, nevafambi vachida kudzivirira nzvimbo dzine vanhu vakawanda munzvimbo huru dza2020 na2021, vanhu vekuEurope vari kutanga kudzokera kumaguta makuru muEurope neruvimbo rwekuroverwa kaviri uye zvirambidzo zvichiva zvishoma. erratic.
Sezvo maguta eEurope ane mukurumbira anovhurwa zvizere kune vashanyi vekunze, vakuru vezvekushanya vanofanirwa kushandisa nguva ino yekukura patsva kuti vawane kuenzanisa pakati pekuita pundutso yehupfumi uye kuve nechokwadi chehupenyu hwakanaka hwevagari. Semuenzaniso, kuvhurwazve kwe Prague kuenda kune dzimwe nyika kushanya kuchave kunonakidza kutarisa.
Pakati pedenda, vakuru vezvekushanyirwa mukati Prague vakataura chinangwa chavo chekushandisa nguva yekuzorora kugadzira nzira dzakasimba dzekushanya kwemaguta mune ramangwana, izvo zvaizofadza vagari. Denda iri risati raitika, guta raive nenyaya nevashanyi vane ruzha vaivhara pakati peguta nekudzikisira hupenyu hwevagari venzvimbo. Prague'Nzvimbo itsva yakakonzera denda yakanzi ndeyekukwezva vashanyi 'vakanyanya kukosha' vaizogara kwenguva yakareba, kupedza yakawanda, uye kazhinji kuita zvine hungwaru panguva yerwendo rwavo.
Ichi chishuwo kubva kuvakuru vezvekushanya kwePrague kuti vatangezve kuburikidza nemishandirapamwe yekushambadzira uye kusundira kuburikidza nezvikamu zvitsva zvemitemo zvinogona kuve zvenguva pfupi sezvo hupfumi hwedenda huri kuramba huchienderera mberi. Nekushanya kwemukati kuCzech Republic kuchiri chikamu che pre-denda, Czech Tourism Union yakadana zviremera zvePrague kuti zviite nekukurumidza kudzivirira dambudziko rehupfumi.
Nerutsigiro rwezvemari rwakanangana neCCIDIDA rwave kupera kumabhizinesi mazhinji ane chekuita nekushanya muEurope, maguta makuru eEurope anogona kutarisisazve huwandu pamusoro pemhando yekukurudzira kupora kwehupfumi.
Iyi shanduko inogona kuitika muhurongwa inogona kuuya kutsamwisa yevagari veko vazhinji vasingafanire kuvimba nekushanya kuti vawane mari. Zvakadaro, zvinofanirwa kubvumwa kuti veruzhinji venzvimbo iyi vachange vachikurudzirawo kuti vashanyi vakawanda vadzoke kuitira kuti vakwanise kuvandudza mari dzavo. Kudzoka kwakazara kwekushanya kweguta mumakore anotevera kunoita kuti pave nekuita kwakaomarara kwevakuru veguta, uye izvo zvinogara zvichikonzera gakava.